ရုတ်တ၇က် မမှတ်မိလောက်အောင် အရင်ပုံစံ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ကွဲထွက်သွားတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ သဇင်ထူးမြင့် – Shwe Likes
ခပ်အေးအေးလေး နဲ့ သိပ်ချစ် စရာကောင်းတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် လေးကို အားလုံးပဲ သိကြမှာပါ။ တက်သစ် စလေးတွေအားလုံး ထဲမှာမှ ခပ်အေးအေးလေးနဲ့ အကြည်ဓာတ်လေးမလို့ အားလုံးက ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်။
ဇာတ်ပို့ ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ အငယ်ဆုံး သမီး ချောလေးမလို့အ ဖေ့ရဲ့အနုပညာ အမွေကို လည်းရရှိထားသူလေးပါနော်။ Double dating အစီစဉ်လေးမှာ လူသိများ လာခဲ့ပြီး Fan အင်အားပိုတိုး လာခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ကလည်း အိမ်မ က်ထဲကအိမ်မက် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ လေးထဲမှာပါဝင်သရုပ် ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါသေး တယ်…
ဖခင်ကြီးရဲ့ အနုပညာ သွေးပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ… သူတို့မောင်နှမတွေအားလုံး ဖခင်ဦးလှိုင်လို အနုပညာသမားတွေဖြစ်ကြပြီး အဲ့ထဲမှာမှ အငယ်ဆုံးလေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အဖေ့ရဲ့အသည်းကျော် ချစ်စရာ မင်းသမီးလေးပေါ့။
မိဘနဲ့ မိသားစုအပေါ်လည်းသိတတ်တဲ့အပြင် အေးအေးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်နေတတ်တာမလို့ မိသားစုတင်မကပဲ ပရိတ်သတ်တွေကပါ သူများကို ချစ်ခင်အားပေးလာကြတာပါ။
ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သီချင်း Mtv တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်စရာကော င်းတဲ့ပုံစံလေးတွေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံ စံလေးတွေနဲ့သာ သရုပ်ဆောင်တတ်ပေမယ့် အခုတစ်ခါမှာ တော့ ခပ်မိုက်မိုက် အချေစတို င်လေးနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်…. ကဲ ဘယ်လောက်တောင် လှလိုက်လဲနော်…. မြင်နေကျပုံစံနဲ့ကွဲထွက်တဲ့ သဇင်ထူး မြင့်ရဲ့မဟူရာ အလှကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦး‌နော်…Credit;
ခပ္ေအးေအးေလး နဲ႔ သိပ္ခ်စ္ စရာေကာင္းတဲ့ သဇင္ထူးျမင့္ ေလးကို အားလုံးပဲ သိၾကမွာပါ။ တက္သစ္ စေလးေတြအားလုံး ထဲမွာမွ ခပ္ေအးေအးေလးနဲ႔ အၾကည္ဓာတ္ေလးမလို႔ အားလုံးက ခ်စ္ခင္အားေပးၾကပါတယ္။
ဇာတ္ပို႔ ဦးခင္လိႈင္ရဲ႕ အငယ္ဆုံး သမီး ေခ်ာေလးမလို႔အ ေဖ့ရဲ႕အႏုပညာ အေမြကို လည္းရ႐ွိထားသူေလးပါေနာ္။ Double dating အစီစဥ္ေလးမွာ လူသိမ်ား လာခဲ့ၿပီး Fan အင္အားပိုတိုး လာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ ကလည္း အိမ္မ က္ထဲကအိမ္မက္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေလးထဲမွာပါဝင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ပါေသး တယ္…
ဖခင္ႀကီးရဲ႕ အႏုပညာ ေသြးပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ… သူတို႔ေမာင္ႏွမေတြအားလုံး ဖခင္ဦးလိႈင္လို အႏုပညာသမားေတြျဖစ္ၾကၿပီး အဲ့ထဲမွာမွ အငယ္ဆုံးေလး သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့ အေဖ့ရဲ႕အသည္းေက်ာ္ ခ်စ္စရာ မင္းသမီးေလးေပါ့။
မိဘနဲ႔ မိသားစုအေပၚလည္းသိတတ္တဲ့အျပင္ ေအးေအးေလးနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေအာင္ေနတတ္တာမလို႔ မိသားစုတင္မကပဲ ပရိတ္သတ္ေတြကပါ သူမ်ားကို ခ်စ္ခင္အားေပးလာၾကတာပါ။
ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သီခ်င္း Mtv ေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္စရာေကာ င္းတဲ့ပုံစံေလးေတြ ႐ိုး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္းပုံ စံေလးေတြနဲ႔သာ သ႐ုပ္ေဆာင္တတ္ေပမယ့္ အခုတစ္ခါမွာ ေတာ့ ခပ္မိုက္မိုက္ အေခ်စတို င္ေလးနဲ႔ ဓာတ္ပုံေလးေတြကို တင္ထားခဲ့ပါတယ္…. ကဲ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လွလိုက္လဲေနာ္…. ျမင္ေနက်ပုံစံနဲ႔ကြဲထြက္တဲ့ သဇင္ထူး ျမင့္ရဲ႕မဟူရာ အလွကို ၾကည့္လိုက္ၾကပါဦး‌ေနာ္…Credit;
ခုလိုအချိန်ကြီးမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေပြန်လုပ်တာ လိပ်ပြာလုံရဲ့လားလို့ မေးလာခဲ့ရင် ပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတစ် ခုပြောနိုင်ကြောင်း ရေးသားလာတဲ့ သီရိရှင်းသန့်
သူမရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေး အခြေအနေလေးကို ဗီဒီယိုလေးနှင့်တကွ ထုတ်ပြလာတဲ့ အဆိုတော်ဆိုဖီယာ
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမရှိ “နှင်းဆီ” အဖွဲ့ကနေ တရားဝင်နှုတ်ထွက်လိုက်ပီလို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ နှလုံးလှလူမိုက်ကြီး